Ady amin’ny fampiasana harona plastika Tsy ampy ny fanentanana
Omaly alarobia 3 jolay 2019 no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena tsy hampiasana harona plastika. Maro ny firenena efa manomboka manohitra ny fampiasana ireny.
Ny eto Madagasikara kosa dia tsy afaka mihitsy ny fahazaran-dratsy na dia efa nisy hatrany aza ny fanentanana. Tany Senegaly manokana, ohatra, natao ny lalàna momba ny fandrarana ny famokarana, ny fampidirana, ny fitazonana, ny fanapariahana, ny fampiasana ireny harona plastika madinika ireny ary hita ho nahomby satria nahatsara tanteraka ny tontolo iainana. Ankoatra izay, nasiana mihitsy ny fanodinana sy fitantanana ara-barotra ny fako plastika. Teto amintsika, efa nisy ny dingana sy ezaka nataon’ny minisiteran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra hampiharana io lalàna io ihany koa saingy tsy mipaka tsara amin’ny vahoaka ny fanentanana. Manampy trotraka koa ny tsy fisiana sy ny tsy fahampian’ireo tetikasa fanodinana kanefa nampandroso firenena afrikanina maro tahaka ny Senegaly sy Roanda izany.